दयाहाङ छाडेर सञ्जयसँग प्रियंका, कति जम्यो जोडी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentदयाहाङ छाडेर सञ्जयसँग प्रियंका, कति जम्यो जोडी ?
लण्डनमा छायाँकन गरिएको मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म ‘हेप्पी डेज’को ‘लभ सङ’ रिलिज भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच फिल्ममा समावेश ‘तिमी बीना’ बोलको गीत रिलिज गरियो । सार्वजनिक गीतमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की अभिनेता सञ्जय गुप्ताको अंगालोमा भेटिन्छिन् ।
रामकुमार केसीले खिचेको फिल्म चाम्स ईन्टरटेन्मेन्ट र लण्डन आईको संयुक्त प्रस्तुतीमा तयार भएको हो । सम्राट बस्नेतले यो फिल्ममा एक्सन निर्देशन गरेका छन् भने कोरियोग्राफी निर्देशक चाम्सको नै छ ।
प्रेम भाव बोल्ने गीतमा प्रियंका र सञ्जयको प्रेम छल्किएको छ । फिल्ममा लिड अभिनयमा दयाहाङ राई पनि छन् । तर सार्वजनिक गीतमा उनलाई भेटिँदैन् । ताराप्रकाश लिम्बु र दीपा लामाको स्वर रहेको गीतमा संगीत ताराले नै भरेका छन् । दिनेश राउतले शब्द लेखेका हुन् ।